Ukufudumala kwembulunga yonke kuzoholela abaseMelika ukuthi basebenzise kakhulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Lapho bekutshela ukuthi izinga lokushisa eliphakathi komhlaba liyanda nokuthi imvula iyancipha ezingxenyeni eziningi zomhlaba, kulula kuwe ukuthi ucabange ukuthi ngeke kube nosizo kubantu. Kepha yebo, kunjalo.
Ngokwesifundo esenziwe nguNick Obradovich futhi sashicilelwa ephephabhukwini i-'Nature Human Behaeve ', ukufudumala kwembulunga yonke kuzoholela abaseMelika ukuthi basebenzise okwengeziwe.
Njengoba ubusika buqala ukubanda, abantu bavame ukufuna ukuphuma bayozivocavoca kakhulu. Ekupheleni kwekhulu leminyaka, labo abahlala emadolobheni afana neNyakatho Dakota, iMinnesota neMaine bangazuza kakhulu. Ngokusho kwakhe ukutadisha, bangakhuphula ukusebenza kwabo ngokomzimba ngo-2,5%.
Kepha ngeshwa labo abahlala eningizimu, ikakhulukazi eduze nogwadule, kuzodingeka bachithe isikhathi esithe xaxa ekhaya ngoba amazinga okushisa angaphandle angabekezeleleka. I-Arizona, eningizimu yeNevada naseningizimu-mpumalanga yeCalifornia bangathola ukwehla okukhulu kakhulu komsebenzi ngasekupheleni kwekhulu leminyaka.
Ukufinyelela kulesi siphetho, u-Obradovich wahlaziya ucwaningo lukahulumeni oluhlobene nemikhuba yokusebenza, imininingwane yesimo sezulu nsuku zonke kusuka lapho kwenziwa izingxoxo, kanye nokulingiswa kwezimo zezulu zesikhathi esizayo. Ngakho, wakubona lokho Lapho i-thermometer ifunda ama-28 degrees Celsius noma ngaphezulu, abantu bebonke banesifiso esincane sokuphuma.
Noma kunjalo, noma lokhu kuyinzuzo encane emadolobheni athile, iqiniso ukuthi ukufudumala kwembulunga yonke kuyingozi kakhulu kunenzuzoNjengoba uDkt. Howard Frumkin, uprofesa wezempilo yezemvelo e-University of Washington, asho. Ukufika kwezinambuzane zasezindaweni ezishisayo ezindaweni ezifudumele kungabeka izimpilo zabantu abaningi engozini, hhayi eMelika kuphela, kodwa kuzo zonke izingxenye zomhlaba ezinesimo sezulu esipholile.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukufudumala kwembulunga yonke kuzoholela abaseMelika ukuthi basebenzise kakhulu